Chelsea oo u aragta xiddiga Southampton Danny Ings inuu yahay bedelka Erling Braut Haaland. Horyaalka Ingiriiska
Home Horyaalka Ingiriiska Chelsea oo u aragta xiddiga Southampton Danny Ings inuu yahay bedelka Erling...
Chelsea oo u aragta xiddiga Southampton Danny Ings inuu yahay bedelka Erling Braut Haaland.
Chelsea ayaa lagu soo waramayaa inay fiiro gaar ah ku heyso Danny Ings oo ka tirsan Southampton kaasi oo badal u noqon kara bartilmaameydka kooxda ee xidiga kooxda Borussia Dortmund Erling Braut Haaland .
badalka Haaland ayaa wali ah muhiimada kooxda chelsea ka dib markii uu shabaqa soo taabtay Champions League kulankii Sevilla, iyadoo Real Madrid iyo Manchester City ay labaduba si aad ah loola xiriirinayay.
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Norway ayaa lagu heli karaa 66m 2022 sababo la xiriira in qandaraaska lagu burburin karo, Chelsea ayaa la filayaa inay la soo wareegto weeraryahan kale oo ay ku darsato safkooda.
Sida laga soo xigtay football.london , raadinta Thomas Tuchel ee weeraryahan cusub ayaa Blues u horseedi karta inay tixgeliyaan xiddiga Southampton Ings, kaasoo mustaqbalkiisu sidoo kale hawada ku jiro.
Tababaraha kooxda Saints Ralph Hasenhuttl ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay in Ings uu sii dheereyn doono joogitaankiisa St Mary’s wixii ka dambeeya 2022, laakiin rajada ah inuu ciyaaro Champions League kooxda Chelsea ayaa ku soo jiidan karta 28 jirkaan – sidoo kale lala xiriirinayo Man City.
In kasta oo uu la dhibtoonayay dhaawacyo Ings ayaa dhaliyay siddeed gool wuxuuna caawiye ka noqday seddex kale 18 kulan oo Premier League ah.
Previous articleManchester United oo guul ka gaartay Real Sociedad koobka Europe League
Next articleArsenal oo Bar-baro kala kulantay kooxda Benefica